जापानमा सेप्टेम्बर: टाइफुनबाट सावधान! शरद graduallyतु बिस्तारै आउँछ - Best of Japan
होक्काइडो, जापान = शटरस्टकमा टेसेट्सुजान पहाडमा शरद oliतु
यदि तपाई सेप्टेम्बरमा जापान जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको कस्तो प्रकारको ध्यान छ? त्यसो भए, सेप्टेम्बरमा जापानमा पर्यटन स्थलहरू कहाँ सिफारिस गरिएको छ? यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई उपयोगी जानकारी प्रस्तुत गर्दछु जब तपाईं सेप्टेम्बरमा जापान जानुहुन्छ।
टोक्यो, ओसाका, सेप्टेम्बर मा होक्काइडो को जानकारी
हामी सधैं पछिल्ला मौसम पूर्वानुमान प्राप्त गरौं
मन्दिर र मन्दिरहरू जस्ता दर्शनीय स्थलहरूको भ्रमण गरौं
होक्काइडोमा तपाई दुबै ग्रीष्म र शरदको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं सेप्टेम्बरमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइडरको छवि क्लिक गर्नुहोस् र थप जानकारी हेर्न जानुहोस्।
एक ठूलो छाल समुद्री तटमा अवस्थित Oarai Isosaki तीर्थ मन्दिरमा प्रहार गर्दछ जब आँधी आउँछ = AdobeStock
यदि तपाईं सेप्टेम्बरमा जापान जानुहुन्छ भने, कृपया सधैं भर्खरको मौसम पूर्वानुमान प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
सेप्टेम्बरमा मौसम गम्भीर परिवर्तन हुँदैछ। सेप्टेम्बर मा धेरै बरसात दिन छन्। थप रूपमा, आँधीले अक्सर आक्रमण गर्दछ। यदि जापानमा एक टाइफुन आउँदो दिन देखिन्छ भने, कृपया तपाईंको यात्रा यात्रा जतिसक्दो चाँडो परिवर्तन गर्ने विचार गर्नुहोस्। जब टाइफून आइपुग्छ, धेरै रेल र विमानहरू सर्दैनन्। तपाईं सार्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईं यस्तो अवस्था सामना गर्नुपर्दछ, कृपया नजिकको होटलको लागि आरक्षण गर्नुहोस् यो पूर्ण हुनु अघि।
क्योटो, जापानको प्रसिद्ध स्थलहरू मध्ये एक, फुशमी इनारी मन्दिरमा रेड तोरी गेटहरूमा हिंड्ने किमोनोमा आइमाईहरू = शटरस्टक
जब पर्यटक सेप्टेम्बर मा यात्रा, तिनीहरू आंधी आक्रमण बारे चिन्तित छन्। यद्यपि यो बाहेक, मेरो विचारमा यो एक अर्थमा धेरै राम्रो समय हो। किनभने प्रसिद्ध पर्यटक स्थलहरू अक्टुबर र नोभेम्बरको तुलनामा कम भीडले भरिन्छन्। तपाईं तुलनात्मक रूपमा शान्त रूपमा मन्दिरहरू र मन्दिरहरू हिंड्न सक्षम हुनुहुनेछ।
कहिले काहिँ पानी पर्न सक्छ, तर यदि तपाई मन्दिर र मन्दिरको भ्रमण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यसले खास असर पार्ने छैन। बरु, तपाइँ वर्षा द्वारा गीला सुन्दर इमारत को प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ।
सेप्टेम्बरको आखिरमा, पूर्णिमाको मूल्यांकन गर्न चन्द्र दृश्य अभ्यास छ। क्योटो शहरमा, सम्बन्धित कार्यक्रमहरू प्रत्येक वर्ष यासाका तीर्थ र डायकाकूजीमा आयोजित हुन्छन्। मन्दिर आदि
यासाका तीर्थको इतिहास | यासाका तीर्थ
Yasaka Shrine.Introduce of History, वेब साइटको वेब साइट।
वार्षिक घटनाक्रम - 旧 嵯峨 御所 大本 山 大 覚 寺
Panoramic फूल उद्यान Shikisai-no-oka सेप्टेम्बर २०, २०१ok मा होक्काइडो, जापान = शटरस्टकमा
यस समयमा, यदि तपाईं होक्काइडो वा होन्शुको उच्च पहाडहरूमा जानुहुन्छ भने, तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने तपाईं गर्मी र शरद दुवैको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
यो अझै सेप्टेम्बरको सुरूमा तातो छ। यद्यपि यो अचानक चिसो हुनेछ। यो मौसमको पालो हुनेछ। तसर्थ, यदि तपाइँ सेप्टेम्बरमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ दुबै गर्मी दृश्य र शरद sceतु दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं Biei-cho र Furano जानुहुन्छ, तपाईं सुन्दर फूलहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ जस्तै झण्डा र dhlia जस्तै अगस्ट जस्तै। पर्यटकको संख्या अगस्ट भन्दा थोरै कम छ र आराम गरेर आराम गर्नुपर्दछ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं डेइसेट्सुआनमा जानुहुन्छ भने, तपाईं यस पृष्ठको शीर्ष चित्र जस्तो शरद leavesतुको पातहरूको सुन्दर दृश्यको मजा लिन सक्नुहुन्छ। सबै तरिकाले, जानकारी राम्ररी संकलन गर्नुहोस् र सन्तुष्टि संग यात्रा को मजा!
जापानमा पनि टाइफून र भारी वर्षाबाट हुने क्षति विश्वव्यापी तापक्रमका कारण बढ्दो छ। थप रूपमा, भूकम्प प्राय: जापानमा हुन्छ। यदि तपाईंले जापानमा यात्रा गरिरहनु भएको बेला आँधी वा भूकम्प आयो भने तपाईंले के गर्नुपर्छ? अवश्य पनि, तपाईले त्यस्तो केसको सम्भावना देख्नुहुन्न। यद्यपि यो ...